Apple Fariimaha Ka Qaadanaya Microsoft? | Martech Zone
Waxay umuuqataa toddobaad kasta inaan soo dejinayo cusbooneysiin adeeg kale ah oo loogu talagalay Vista. Dhawaanahan, Vista waxay haysatay Shaqo Adeeg isla maalintaas Apple ay heysay cusbooneysiinteeda 10.5.3 ee OS X Leopard. Tan iyo markii la cusbooneysiiyay Leopard, waxaa igu soo dhacayay tan badan oo arrimo ah anigoo adeegsanaya biraawsar… haddii ay yihiin Safari ama Firefox.
Maanta waxaan go'aansaday inaan dib u rakibo Safari si aan u arko haddii aan wax ka qaban karo mar uun iyo dhammaanba. Markii aan bilaabay rakibaadda, waxaa ila kulmay tan:
Marka ma waxay sameeyeen casriyeyn laakiin waxay dayaceen inay cusbooneysiiyaan rakibitaankooda Safari si ay ugu oggolaadaan? Oh Oh gacaliye Apple, laga yaabee inaad sii yaraato. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in aan u adeegsanayo Firefox in Parallels on this MacBookPro in aan hada si dhakhso leh ugu faafo shabakada.
Tags: Kaararka kirismaskaecommercefasax infographicnoocyada moobiilkacalaamadaha bulshadaHeerarka beddelashada kiniinkaadmin
Ku xayiran Diyaarad 3.5 Saacadood
Jun 3, 2008 at 9: 51 PM
Dhibaato isku mid ah ayaan soo maray. La socodsii haddii aad wax ka hagaajiso!
Baahnayn in la iraahdo, waxaan aad u isticmaalayay pc-keyga baryahan dambe. Runtii waxaan kaliya u isticmaalay Mac wixii ay ugu fiicantahay si kasta purposes ujeedooyin naqshadaysan.
Jun 4, 2008 at 9: 21 PM
Waxaan helay hal codsi oo umuuqday isku dhac waana taas Qarsoodi Orbicule. Waxaan qoray taageeradooda oo aan si buuxda uga saaray arjiga waxaanan umuuqdaa inaan sifiican usocdo. Waa wax aad u xun, waxaan jeclahay amniga dalabkoodu bixiyo. Waxaan ka codsaday inay i soo qoraan markay arrintani hagaagto.
Weli waxaan u maleynayaa in laga yaabo inay arrimo kale oo dheeri ah, laakiin tani waxay ahayd tan ugu weyn.